Shina fanatanjahan-tena toy ny mpampiasa vola orinasa miroborobo mitady làlana vaovao ho an'ny fitomboana - Sina Tianjin Shengxin Sports Goods
Shina fanatanjahan-tena toy ny mpampiasa vola orinasa miroborobo mitady làlana vaovao ho an'ny fitomboana
Fuzhou - Ny fitandremana ny tsy misy kilema sy miovaova dian'ny fampandrosoana, ny fanatanjahan-tena orinasa Sinoa no miroborobo tamin'ny 2016 toy ny mpampiasa vola niezaka ny hanafina ny midadasika kokoa ny raharaham-barotra isan-karazany, raha mahita fitaovana vaovao hitondra fitomboana.
Filankevi-panjakana Shina Namoaka antontan-taratasy tamin'ny 2014 mba hitarika ny fampandrosoana ny indostria sy ny fanatanjahan-tena mba hampiroboroboana ny fanatanjahan-tena fandaniana. No 46 rakitra no heverina ho ny niavaka ny orinasa ny fiakaran'ny tantara.
Faritany politika, mifototra amin'ny tahirin-kevitra ny firenena, efa navoaka nandritra ny 2015 amin'ny faritra samihafa, ary bebe kokoa fepetra manokana no nalaina sy ny tanàna sy ny faritra haavon'ny.
Ny Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena namoaka ny faha-13-taona dimy Plan eo amin'ny fanatanjahan-tena ity Jolay indostria, ary ny sasany hafa zanabolana 22 antontan-taratasy ho fanohanana ny drafitra. Ireo antontan-taratasy manazava fa ny fanatanjahan-tena orinasa dia hihoatra 3 tapitrisa tapitrisa yuan ($ 432 miliara) ny taona 2020. Ny orinasa ny nanampy lanjan'izy ireo dia tokony namely ny iray isan-jaton'ny harin-karena faobe, ary ny fanatanjahan-tena fanjifàna dia antenaina mba namely 2,5 isan-jato ny fanary fidiram-bola isan'olona ny dia .
The National Fitness Program (2016-2020) sy ny Healthy Outline Shina (2030) koa navoaka tamin'ity taona ity mba hanolotra toro-lalana mazava ho an'ny paikady nasionaly ny olom-pirenena mendrika sy ny fahasalamana ary ny fanatanjahan-tena midadasika kokoa orinasa ihany koa.
Ny Filankevi-panjakana nanamarika ihany koa ny olana eo amin'ny toe-quo ny Fitness SY FIALAM-BOLY fanatanjahan-tena orinasa, nanolotra toromarika raha ny amin'ny asa lehibe mialoha amin'ny firenena toromarika Namoaka ity Oktobra.
Ankoatra izany, ny Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, miaraka amin'ny maro hafa governemanta sampan-draharaha-pirenena, nivoaka politika sy drafitra ririnina amin'ity taona ity eo amin'ny fanatanjahan-tena, ny rano fanatanjahan-tena, Aero fanatanjahan-tena, fanatanjahan-tena sy ny ivelan'ny trano be tendrombohitra zavatra hafa.
Politika ireo izay mifandray amin'ny fanatanjahan-tena fotsiny indostria dia tsy tifitra amin'ny maizina; izy ireo tamin'izany andro izany zava-misy, azo ampiharina sy hiorina. Sady nanao an'i avy ny tondrozotra ho amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahan-tena orinasa Shinoa ao amin'ny taona ho avy.
Nandavaka ambony IP, vola dia midadasika kokoa
Amin'ny fomba manaitra hafa noho ny onjan'ny fividianana hita maneran-tany tamin'ny taon-dasa, fanatanjahan-tena Shinoa mpampiasa vola toa hanao zavatra tamim-pitandremana nanomboka tamin'ny 2016 ary hitady fomba tsara kokoa ny manao raharaham-barotra.
Shina mpaninjara goavana Suning Group dia nahazo 70 isan-jato amin'ny teny italiana tsatòka Football Club Inter Milan, ny fifanarahana mendrika 270 tapitrisa euros ($ 282 tapitrisa), angamba ny lehibe indrindra tapa-vaovao ho avy avy amin'ny fanatanjahan-tena orinasa tamin'ity taona ity.
Mandritra izany fotoana izany, mainka lehibe chunks ny Renivohitra no miovaova ny orinasa ny mifantoka amin'ny nandroaka ny tsena tena ilaina ny fanatanjahan-tena Ventures.
Shina première tambajotra sosialy orinasa Tencent nanao sonia ny fifanarahana tamin'ny FIBA, lasa mpiara-miasa ny tampony nandritra ny sivy taona. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny FIBA ​​sy Tencent hotontosaina ao amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy, fandoavam-bola amin'ny aterineto,-tserasera mivantana sy ny e-varotra.
Ny lenta ny fiaraha-miasa dia tsy mitsaha-mitombo. Shinoa tena toetrany goavana Wanda Group dia nametraka ny fiaraha-miasa manokana amin'ny FIBA ​​maneran-tany ho fanohanana, anisan'izany ny fivarotana ny zo sy ny fahazoan-dalana maneran-barotra ny zo ho amin'ny fe-potoana efatra basikety World kaopy, ny 2033.
Fiaraha-miasa no mamelana ao amin'ny ao an-toerana ihany koa aloha. Shinoa e-varotra mafy Ali Sports nandray ny zo manokana ho an'ny CUBA TV (Shinoa Basketball Association University). Online orinasa lahatsary Storm Sports nampivelatra ny raharaham-barotra mba ahitana ny CBA (Shinoa Basketball Association) fampitàna mivantana. Antenaina fa ny fifaninana ho an'ny CBA ny zon'ny TV dia ho tena henjana sy masiaka tamin'ny 2017, rehefa nampidirina ny CBA orinasa azy manokana amin'ity taona ity.
Wanda Group no ekipa miaraka amin'ny Sinoa Football Association mba handamina ny China fifaninanana baolina kitra fiadiana ny amboara tamin'ny 2017, nampanantena ny hanao izany ho fanta-daza fikambanana amin'ny ho avy. Mandritra izany fotoana izany vondrona Suning nanao fampiasam-bola goavana eo amin'ny zon'ny TV mividy ho an'ny Anglisy Premiere League, sy Ti'ao Dongli, zo mpihazona ny Shinoa Super League (CSL) dia nametraka ny azy TV fandaharana foibe.
Ankoatra ny IP raharaham-barotra, ny fanatanjahan-tena fampiasam-bola nandeha tany amin'ny faritra midadasika kokoa isan-karazany manerana ny orinasa. Araka ny fikarohana antontan-taratasy eo amin'ny fanatanjahan-tena fampiasam-bola sy ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ny mpandraharaha tsy miankina Sports Bank, vola koa mba niakatra tamin'ny fandaharana ho an'ny kianja fandidiana, fanatanjahan-tena barotra, fanatanjahan-tena haino aman-jery, bodybuilding, ara-batana sy fanatanjahan-tena ny fizahan-tany fiofanana. Rehefa nandresy ny fampiasam-bola, orinasa maro no miezaka startups ho an'ny fampandrosoana bebe kokoa amin'ny alalan'ny fihaonana ny fototra fanamby handresy bebe kokoa ny mpanjifa.
Zhong Bingshu, tale ao amin'ny Capital Oniversiten'i Fanabeazana ara-batana sy ny Fanatanjahan-tena, nilaza loharanom-baovao Xinhua fa lehibe ny Renivohitra Noana ho an'ny Azo oharina anarana lehibe sy langilangy mba hanangana fiaraha-miombon'antoka amin'ny, fa mahita isan-taona-on-taona tsena fiovan'ny fitondran-tena.
"Ny Renivohitra be dia be, dia an-fanatanjahan-tena orinasa, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny ara-panatanjahantena sy ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana malaza tamin'ny 2015. Io fironana efa nihena tamin'ny 2016. Ny mpampiasa vola dia mahazo misaina kokoa ka dia mieritreritra ny fitadiavam-bola vola. Ankoatra ny hetsika ara-panatanjahantena, dia misy be ny varotra mety eo amin'ny fanatanjahan-tena mendrika SY FIALAM-BOLY, "Zhong nandinika.
'Sports +' toekarena
Cross-orinasa fampidirana dia iray amin'ireo mazava indrindra mampiavaka ny Shinoa indostria fanatanjahan-tena izay nitatra ny tsena ho any amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ny kolontsaina, ny fanabeazana, fikarakarana ara-pahasalamana, ary ny tranonkala fifaneraserana. Ny fampandrosoana ny orinasa midadasika kokoa intsony mifantoka manodidina ny tenany fotsiny ny zava-niseho; faritra vaovao ny fitomboana mety no nanokatra ny vaovao azo atao. Ireo lalambe ho an'ny orinasa cross-fiaraha-miasa dia fantatra amin'ny hoe 'fanatanjahan-tena +' fahafahana.
Raiso fanatanjahan-tena + toy ny fizahan-tany ohatra. 3.38 tapitrisa ny olona nandray anjara tamin'ny fanatanjahan-tena ny sasany 311 avy any Jan hatramin'ny Aprily tamin'ity taona ity, mandany tanteraka ny 11.9 miliara yuan ($ 1.7 lavitrisa) ao amin'ny fifamoivoizana, serasera, hotely, sakafo karakaraina, sy ny asa hafa.
CSL tahirin-kevitra ofisialy dia mampiseho fa ny eo ho eo ny mpanatrika isaky ny lalao haben'ny vanim-potoana io dia 2.000 mihoatra noho ny tamin'ny 2015. Ankoatra ny mijery ny lalao velona, ​​bebe kokoa ny mpankafy mijery ny lalao amin'ny alalan'ny aterineto. Toy izany koa no niseho fironana amin'ny basket, volley sy ny table tenisy.
Ny 'fanatanjahan-tena +' raharaham-barotra koa ny mila mandresy ny fahaizantsika Vao nanomboka ny ny fampandrosoana. Maro ny fanatanjahan-tena orinasa tsy afaka hanana preferential hetra politika ary ny sasany eo an-toerana sy ny lalàna dia haingana toy fitsipika aoriana lavitra ny fampandrosoana ny indostria.
Sports fikambanana, maro izay tsy mbola fanavaozana ary nanao ho tsy miankina amin'ny fanjakana taova, manana tanana malemy hilalao eo amin'ny fampandrosoana ny orinasa. Mandritra izany fotoana izany, ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa fanatanjahan-tena dia mbola olana goavana any amin'ny tanàna maro.
Nony nandroso, TAOZAVA-BAVENTY manam-pahaizana milaza fa ny fanatanjahan-tena raharaham-barotra, toy ny vao Rising Star ao Shina ny Toe-karena, dia mitaky faharetana sy ny fitondran-tena nampahafantatra ny fototra tsena fikarohana fa tsy ny filokana amin'ny Renivohitra be dia be mba hitady ny velona sy ny fahombiazana avy hatrany soa.
Post fotoana: Jul-26-2018